09.05.2020 Category: Progettazione di siti Web
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, saingy tsy voatery ho lafo izany. Tsy mila intsony ianao mandoa vola dolara an’arivony hampivelatra di fehezan-dalàna ananany, ary avy eo dia mandoa an’arivony maro isan-taona mba hitazonana io tranonkala io. Eny, tsy izany intsony.
1 Le tue opzioni
2 Ny Face Off: WordPress vs Costruttori di siti Web
2.1 1 – Flessibilità
2.4 4 – Plugin sy Addon
2.5 5- Costo
2.7 7- Limitazioni
2.8 8- Popolarità
3 Fananganana: WordPress con tranonkala tranonkala?
Ireo safidy roa ireo dia manome rafitra matanjaka sy mavitrika amin’ny fananganana ny tranokalanao, ary koa ny rafitra ho anny fitantanana sy famoahana ny votoatin’ny Internet.
WordPress ha dato il massimo a Fampiasana a tutti gli altri server rehetra izay manohana di PHP come MySQL, così come è seria rehetra maneran-tany no manao an’ity andro ity. Ny mpikarakara tranokala dia matetika mandoa vola isam-bolana raha toa ka te hampiasa azy ireo ianao.
Ny Face Off: WordPress vs Costruttori di siti Web
WordPress dia mahery, maning soy ny mari-pahaizana fianarana izy. Costruttori di siti Web dia tsy dia matanjaka loatra fa mora kokoa amin’ny fampiasana. Ny fiaraha-miombon’antoka dia toy izao manaraka izao:
Ireo mpanorina tranonkala tsara dia manana tonian-dahatsoratry ny fangoso ny pejy izay ahafahanao mamolavola singa ao anaty tranonkala. Interfaccia WordPress tsy manana maso. Fa kosa, misy WYSIWYG (izay hitanao fa azonao) editore.
Costruttore di siti Web gratuito di FastWebHost – tonga isaky ny fonosana fampiantranoana.
Con WordPress in bocca all’infinito – avy amin’ny bilaogy manokana ao amin’ny tranonkalan’ny onjam-peo feno tsipika, mankany aminny fivarotana amin’ny aterineto. Vokatr’izany, indraindray dia mahatsapa ho mampikorontan-tsaina sy mifintina izy- satria natao mba hahafahana manao zavatra maro.
Ireo mpamboly tranokala dia tsy dia marefo loatra. Izy ireo dia natao hananganana tranonkala mahazatra toy ny orinasa madinika sy trano fisakafoanana. Ny ankamaroany dia hanampy ampamoaka vaovao isanandro, saingy mbola tsy mavitrika tahaka ny famoronana ny tenanao amin’ny WordPress.
Miaraka amin’ny fanodikodinam-pahefana, dia manova zavatra a anatin’ny rafitra ianao. Azonao atao ny mampifanaraka ny zava-drehetra a anatin’io rafitra io, saingy ny drafitra fototra sy ny fizotry ny tranonkala dia mitovy ihany. Ireo mpamboly tranokala dia mirehareha amin’ny fananana ireo "tsara indrindra" izay manaraka ny fomban-drazana nomem-boninahitra. Tsy voatery hisalasala ianao raha toa ka azo alaina ny tranokalanao, saingy tsy hahazo tombony amin’ny famoronana tranonkala koa ianao.
Jereo kely Designer Gleb o Duplos mba hijery ny dikany.
4 – Plugin sy Addon
Ny iray amin’ireo tanjaka amin’ny WordPress dia ny fiarahamoniny goavana. Namorona ity fiaraha-monina ity lohahevitra e un’arivony plug-in ho un qualsiasi WordPress. Izany dia manitatra ny asan’ny tranonkalanao. Raha manana hevitra ianao, dia azo inoana fa hitanao ny plugin izay mamela anao hanao izany. Saingy satria ireo plugins ireo dia noforonin’ireo olona samihafa izay afaka manatanteraka tsy an-kijanona. Ny plugin dia mety ilainao hanatsotra ny code amin’ny loha-hevitrao, na manala plugin hafa mba hiasa tsara.
Ireo tranobe mpikarakara tranokala dia tsy manana plugins maro na lohahevitra toy di WordPress. Fa, la satria tafiditra è un’anima trano di fanampim-panaovan’izy ireo, ny ankamaroan’izy ireo dia ho tsara ihany raha tsy mila mampiasa azy ireo ianao. Ny tsy mitongilana dia mazava ho azy fa tsy hahita plugins amin’ny zavatra rehetra ianao. Indraindray ianao dia mila manao tsy misy.
Ny tombony lehibe hafa izay WordPress dia manana plugins maimaim-poana. Ny ankabeazan’ny plugins dia maimaimpoana. Na dia mety mila mividy aza ianao mba hahazoana plugins mahery na singa hafa manokana, ny adiresy maimaim-poana dia tsara ho anny rehetra. Ny ankamaroan’ny tranokala fananganana tranonkala amin’ny lafiny iray dia voakasina na famandrihana.
WordPress no mahatonga ny tranokalan’ny fanorenana mora, nefa mbola mila fotoana sy fahaizana ihany koa izy. Izany no antony fananana mpandrindra iray Mety ho lafo (na dia kely noho ny eritreritrareo) aza. Ny tranonkala iray mahazatra dia mety handany $ 800 + (amin’ny farany ambany). Ny fikojakojana ny vohikala dia mety mbola mitaky mpandraharaha mahaleotena hanampy anao, izay mitaky sazy fanampiny. Avy eo dia misy ihany koa ny vidin’ny fividianana domains (matetika $ 1,50 hatramin’ny $ 14 isan-taona) ary ny fampiantranoana ($ 12 / taona +) Ny ankamaroan’ny mpanorina tranonkala dia manomboka amin’ny latsakyy $ 20 / volana. Azonao atao ny manoratra ny tenanao ary manova kopia, mampakatra sary, na manampy pejy vaovao anatin’ny segondra. Mbola mila mandoa ho anny faritra misy anao ianao, fa ny fampiantranoana kosa dia tafiditra ao.
Sito Web MpanorinaVidiny (isam-bolana)
Web host veloce Hosting gratuito di miaraka amin’ny (manomboka amin’ny $ 1 / volana)
BoldGrid $ 4,19 / mese
SiteBuilder $ 4,99 / mese
Wix $ 9,25 / mese
Doodlekit.com $ 10,00 / mese
Weebly.com $ 12,00 / mese
SquareSpace $ 18,00 / mese
WordPress dia hafa tanteraka. Mba hampiasana WordPress ilainao mahita tranonkala iray izay afaka mametraka WordPress aminny MySQL sy aminny fanohanana PHP. Azonao atao koa ny mianatra ny fomba fampiasana ftp na fomba hafa ahafahana mandefa ny WordPress rakitra amin’ny mpampiantrano anao.
Ny tombony tihibe an anny WordPress dia afaka manosika azy hatrany amin’ny tranonkala hafa izay manolotra fifanarahana tsaratsara kokoa na tolotra tsara kokoa (na roa). Amin’ny tranonkala mpamorona tranokala, ianao dia eo amin’ny fandraisana azy ireo mandrakizay.
Ny ankamaroan’ny mpikarakara tranokala dia hanana fetrany sasany, toy be be be be be yy fifamoivoizana (bandwidth), na dia aminny safely lafo vidy aza. Ny sasany mety mampiseho ny dokam-barotra ao amin’ny tranokalanao miaraka amin’ny sarany ambany sarany.
Ny tranokala tranokala DIY dia somary vaovao. Nanomboka nalaza izy ireo nandritra izay taona vitsy lasa, indrindra tamin’ny fivoaran’ny Shopify – tranokala fai-da-te fai-da-te e un altro e-commerce kely.
Fananganana: WordPress con tranonkala tranonkala?
Mpankafy ha vietato di usare WordPress izahay. Raha manao zavatra ianao dia tokony hanao izany tsara ary mino izahay fa ny fampiasana ny fotoana ao amin’ny WP dia mendrika izany.
Azo antoka fa manahy momba ny vidiny ianao. Aza manao. Noho habetsahan’ny vondrom-piarahamonina WordPress sy ny lazany, dia mbola tsy lafo kokoa noho ny taloha ireo mpandrindra. Afaka mahita mpandala ny mahaleotena betsaka ianao raha mijery manodidina. Azontsika atao ihany koa ny manoro ny sasany, raha manana fonosana fampiantranoana miaraka aminay ianao.
Na dia izany aza, aza mamela ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitra ho anao – indraindray ianao dia mila mamela ny tananao maloto ary manandrana zavatra. Manoro hevitra anao izahay Mifidy ny tranonkala tsara indrindra izay manolotra fanohanana di WordPress sy tranokala maimaim-poana. Raha manao ilay asa ho anao ny tranonkala mpanorina, dia ankafizo, miarahaba anao. Raha tsy izany dia manana fampiantranoana izay azonao atao ny mametraka WordPress amin’ny alalan’ny tsindry iray.
Rupi S. Azrot no tale jeneralin’ny FastWebHost – orinasa fampiantranoam-barotra amin’ny Internet. Nandritra ireo taona 17 taloha dia FastWebHost no nampiantrano ny domains 200.000 aon amminny foibe data-n’ny 6 manerantany. Nanangana FastWebHost i Rupi rehefa vita di Masters in California con Oniversiten. Raha mikasa ny tetikasa vaovao iray ianao, dia faly izy manampy.
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, saingy tsy voatery ho απαιτούν. Tsy mila
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, saingy tsa voatery ho lafo izany. Tsy
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy، saaryy tsy voatery ho lafo izany. Tsy
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, saningy tsy voatery ho lafo izany. Tsy